Lohataona, ririnina, fahavaratra Tsy mety foana ny delestazy
Mpampiasa ny volam-panjakana Olana ny fahasarotan’ny lalàna
Nifarana omaly ny atrikasa fanavaozana ny paikady amin’ny fitantanana ny volam-panjakana.
Fahantran’ny ankizy malagasy Refesina amin’ny teknika vaovao MODA
Mikarakara atrikasa mandritra ny 2 andro ny Vondrona Iraisam-pirenena miaro ny ankizy sy ny zony (UNICEF) miaraka amin’ny INSTAT.
Tapaka ny herinaratra amin'ny toerana maro eto Antananarivo sy ny manodidina amin'izao fotoana izao, noho ny andro ratsy izay miteraka tsy fahatomombanan'ny fitaovam-pitaterana herinaratra, hoy ny Jirama omaly takariva.
Rehefa ratsy toy izao ny andro dia betsaka ireny taribian-jiro ireny no tapaka ka iangaviana isika rehetra tsy handray azy ireny, indrindra tsy hanakaiky ny andrin-jiro mba hisorohana ny loza. Maro isika mpanjifa no miantso ireo laharan-tariby fifaneraserana amin'ny JIRAMA ka betsaka no tsy voaray. Entanina hatrany isika hamerina miantso hahafahana mifampita vaovao, hoy ny JIRAMA. Ireto avy ny laharana : 35 47 (Telma) - 03 35 47 (Airtel) - 032 32 035 47 (Orange). Efa tsy vaovao intsony ny fahatapahan-jiro sy ny delestazy eto amintsika na ririnina na lohataona na fahavaratra. Tsy misy fiantraikany any amin’ny faktiora ireny fa mainka aza miha midangana.